TDK Ikike nkesa multilayer Mgbawa Capacitor, 1206,1210,1812,2220
TDK Ikike nkesa maka Multi oyi akwa Mgbawa Capacitor | Circuit Ocean Int Co. Size 1206,1210,1812,2220, ShenZhen
Anyị bụ ndị dị na-enye ahịa dị iche iche ukara akwụkwọ si TDK, COC, RoHS akụkọ, MSDS akụkọ, Ihe Nkwupụta Data Sheet, Testing report.every akụrụngwa ike isi iyi azụ mbụ emeputa.
Gịnị mere ndị mmadụ ịzụta TDK MLCC ngwaahịa si Circuit Ocean Company?
ase na TDK SMD Efere Capacitor site click esonụ girl "kọntaktị ụdị" ma ọ bụ email na sales@tantalum-caps.com
Multilayer seramiiki mgbawa CAPACITORS.
C Series Commercial mezuwo General (Ruo 50V)
• High capacitance e-enweta site nkenke teknụzụ ndị na-enyere ojiji nke multiple thinner seramiiki dielectric n'ígwé.
• A monolithic Ọdịdị ana achi achi elu n'ibu ike na ntụkwasị obi.
• Low ESL na magburu onwe ugboro ji mara ekwe maka a circuit imewe na anya kwekọrọ n'ụzọ n'ọnụ ụkpụrụ.
• Low onwe-kpo oku na elu ripple eguzogide ruru ala ESR.
• General kọmputa akụrụngwa
• Mobile nkwurịta okwu ngwa
• Ike ọkọnọ circuit
• Office akpaaka ngwá
• TV, Ikanam ngosipụta
• Servers, PC, Notebooks, Mbadamba
C Series Mid voltaji (100 ka 630V)
• voltaji rateing nke 100V ka 630V, na capacitance mbio ruo 15uf.
• Low mmapụta inductance obi sie elu ugboro ole e ji mara.
• Ezigbo DC Bias Njirimara.
• A lineup na mbara-sitere gosiri voltages na-enyere selections na-adabara mkpa.
• Snubber na ike ọkọnọ
• Electric flash na sekit na sekit na dijitalụ ka igwefoto
• Power akpata mma
• Input-mmepụta nyo na ike ọkọnọ
• Driver circuit na plasma ngosi
• Noise uzo
C Series Commercial mezuwo High voltaji (1000V na n'elu)
• Advanced imewe-enye mma idi voltaji e ji mara.
• TDK si proprietary intemal electrode Ọdịdị na ojiji nke lowdielectric-ike ihe onwunwe n'ihi na ukwuu pụrụ ịdabere na arụmọrụ highvoltage ngwa.
• complies na ISO8802-3 maka LAN ngwa.
• E nanị maka reflow soldering.